Linear Aluminum LED Treiber, Waterproof High Power LED Treiber, Automotive Led Driver Manufacturer in China
Description:Linear Aluminio LED Treiber,Waterproof High Power LED Treiber,Vehivavy mpamily fiara mandeha,Mpilalao mena mitondra entana,,
Home > Products > 200-480Vac High Voltage Input LED Treiber > Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber
Ny vokatra avy amin'ny Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber , mpanofana manokana avy any Shina, Linear Aluminio LED Treiber , Waterproof High Power LED Treiber mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Vehivavy mpamily fiara mandeha R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny herinaratra mitondra herinaratra 100W  Contact Now
LED 100W Waterproof  Contact Now
100W 30-50Vdc High Voltage 480Vac LED Treiber  Contact Now
240W 347V Commercial Led Luminaire Lights Driver  Contact Now
480Vac 150W High Voltage LED Treiber  Contact Now
LED Tailleigh High Voltage Driver  Contact Now
Small Wallpack Light LED Treiber  Contact Now
LED High Voltage Explosion-proof Lamp 480V Treiber  Contact Now
Tondro LED 347V ho an'ny hazavan'ny fipoahana hazavana  Contact Now
High Voltage 480V LED Treiber  Contact Now
Ny herinaratra mitondra herinaratra 100W
Fonosana: 15PCS / Carton
Fahold LED Lig hting dia fomba azo itokisana mba hampiasa any ivelany , faritra indostria. Na mila fahazavana hanatsarana ny fahitana na hanatsara ny filaminana isika, ny jiro mpamily antsika dia ny vahaolana ara-toekarena indrindra amin'ny...
LED 100W Waterproof
100W 30-50Vdc High Voltage 480Vac LED Treiber
240W 347V Commercial Led Luminaire Lights Driver
Fahold dia manolotra fiarandalamby LED manomboka amin'ny 40W hatramin'ny 240W izay miasa avy amin'ny mainty 347Vac any Kanada ary ny mainty 480VAC any Etazonia. Ireo mpamily ireo dia manome fahafaha-manao sy fahaiza-manao ho an'ny...
480Vac 150W High Voltage LED Treiber
Fonosana: 18PCS / Carton
Description: Ny laharana FD-150V-xx dia miasa avy amin'ny laharana 180 ~ 525 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome ny lanjany 4,2A amin'ny famoam-peo sy ny laharana ambony indrindra amin'ny 143 V ho an'ny herinaratra ambony 150 W. Natao...
LED Tailleigh High Voltage Driver
Small Wallpack Light LED Treiber
Fahold dia manolotra fiarandalamby goavana LED manomboka amin'ny 40W hatramin'ny 240W izay miasa avy amin'ny mainty 347Vac any Canada ary ny mainty 480VAC any Etazonia. Ireo mpamily ireo dia manome fahafaha-manao sy fahaiza-manao ho...
LED High Voltage Explosion-proof Lamp 480V Treiber
Description: Ny seranana FD-40V-xxx dia miasa avy amin'ny faritra manodidina ny 180 ~ 528 Vac. Ireo sokajy ireo dia manome hatramin'ny 1.2A ny famoam-pitaovana ary ny ampahany farafahakeliny fara-fahakeliny ny 115 V ho an'ny hery lehibe...
Tondro LED 347V ho an'ny hazavan'ny fipoahana hazavana
High Voltage 480V LED Treiber
Description: Ny seranana FD-40V-xxx dia miasa avy amin'ny faritra manodidina ny 180 ~ 528 Vac. Ireo sokajy ireo dia manome hatramin'ny 1.2A ny famoam-pitaovana ary ny ampaham-batana fara-tampony amin'ny 115 V ho an'ny hery lehibe 40...
Shina Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber mpamatsy
Fahold famindram-pahefana 40-240W no manome teknolojia tena lehibe ho an'ny fahombiazan'ny fahombiazana, ny fampihetseham-po sy ny fahamendrehana eo amin'ny sehatra matanjaka. Amin'ny alàlan'ny fepetra mifandraika amin'izany, ity fianakaviana ity dia azo atao amin'ny fampiharana voafaritra manokana sy ny fampiharana modifier. Ny mpandeha Everline LED Universal dia afaka manamboatra ny famokarana maimaim-poana amin'izao fotoana izao hatramin'ny 50% amin'ny haavony tsara indrindra. Ity asa ity dia antsoina hoe tuning, na koa, mpamily LED manodina. Ny fampifanarahana dia manome ny fahafahana mametraka fepetra ahafahana mivezivezy eo amin'ny ambaratonga ambany raha oharina amin'ny vokatra feno. Rehefa tapitra ny mpamily iray, dia mbola azo jerena ihany koa ny hamenany ny fivoahana avy any ivelany amin'ny baiko 0-10V. Ny fanamafisana ny mpamily mifototra amin'ny môlda LED ampiasaina dia tsy mahatonga ny fiarovan-tenana ho maivana kokoa, fa mampitombo ihany koa ny fiainan'ny môlda LED. Ny fametrahana andraikitra dia atao ao anaty fitadidian'ilay mpamily ary tsy very rehefa esorina ny fahefana. Ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra mpamokatra dia mifototra amin'ny vokatra farafaharatsiny raha tsy voamarika amin'ny marika.
Linear Aluminio LED Treiber Waterproof High Power LED Treiber Vehivavy mpamily fiara mandeha Mpilalao mena mitondra entana Linear Lights Aluminio LED Treiber